“ကိုဗစ်ကြောင့် အဖေ၊အမေနဲ့ အဒေါ် ( ၃ ) ယောက်လုံး ကွယ်လွန်သွာပြီး ခိုကိုးရာမဲ့ အမြွှာလေးနှစ်ယောက်” – စွယ်စုံသုတ
“ကိုဗစ်ကြောင့် အဖေ၊အမေနဲ့ အဒေါ် ၃ယောက်စလုံး ကွယ်လွန်သွားပြီး ခိုကိုးရာမဲ့ အမြွှာလေးနှစ်ယောက်”
တမူးမြို့မှာ အမြွှာမောင်နှစ်မနှစ်ယောက်ရဲ့ အဖေ၊အမေနဲ့အဒေါ်ပါ ကိုဗစ်ကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့ရပါတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ ဆရာမဖြစ်သူက ဒီအဖြစ်ဆိုးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမူကွန်ယက်မှာ ရင်နင့်စရာရေးသားထားတာက…”
ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်တော့ဘူး။ရောဂါဆိုးကြီးရယ် အမြန်ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့။ ကိုယ်စာသင်ပေးနေတဲ့ အမြွှာမောင်နှမလေး နှစ်ယောက်မေမေက အရင်ဆုံ:ပြီးဖေဖေနဲ့ အဒေါ်ဖြစ်သူတို့က မေမေရက်လည်တဲ့နေ့မှာ ထပ်ဆုံ:တယ်။သားနဲ့ သမီးကို စာလည်းသင်၊ လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်လည်း သင်ပေးပါ တီချယ်ဆိုပြီး တဖွဖွပြောတတ်တဲ့အစ်ကိုနဲ့အစ်မ။
တီချယ်ရေ..ဒါလေးပြောပေးပါဦး သားနဲ့သမီးက တီချယ်ပြောတာမှ နားထောင်တာဆိုပြီး ဖြစ်စေချင်တာလေးတွေအမြဲပြောတတ်တဲ့ အစ်ကိုနဲ့အစ်မ။ကလေးမြို့ ခဏပြန်ကြတော့ ….ဖုန်းခဏ ခဏ ဆက်ပြီးပြန်လာတော့(စာသင်ဖို့)ခေါ်တတ်တဲ့အစ်ကိုနဲ့အစ်မ။
ကိုယ့်သားသမီးတွေသင်ရုံသာမက.. တီချယ်ရေ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းကလေးတွေ အတွက်လည်း တစ်ချိန်စာလေး လုပ်ပေးပါဦး။ ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းကလေးတွေအတွက်လည်း ပြောထားသေးတယ် အချိန်ချန်ထားဦးနော် . ..ဆိုပြီး sharing လုပ်ပေးတတ်တဲ့အစ်ကိုနဲ့အစ်မ။
သားနဲ့သမီးကိုချစ်လွန်းလို့ အရာရာဂရုတစိုက်အမြဲရှိတတ်တဲ့ အစ်ကိုနဲ့အစ်မခုတော့ စိတ်ချထားခဲ့ပြီလား။အရွယ်နဲ့မမျှ ခံစားကြရရှာမှာတီချယ်ရင်နာလိုက်တာ ဇာနည်နဲ့ဇာခြည်ရယ်..အားတင်းထားကြပါ ကလေးတို့ရယ်.”လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
တမူးမြို့မှာ အမြွှာမောင်နှစ်မနှစ်ယောက်ရဲ့ အဖေ၊အမေနဲ့အဒေါ်ပါ ကိုဗစ်ကြောင့်ကွယ်လွန်ခဲ့ရပါတယ်။ ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ ဆရာမဖြစ်သူက ဒီအဖြစ်ဆိုးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမူကွန်ယက်မှာ ရင်နင့်စရာရေးသားထားတာက…”
ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်တော့ဘူး။ရောဂါဆိုးကြီးရယ် အမြန်ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့။ကိုယ်စာသင်ပေးနေတဲ့ အမြွှာမောင်နှမလေး နှစ်ယောက်မေမေက အရင်ဆုံ:ပြီးဖေဖေနဲ့ အဒေါ်ဖြစ်သူတို့က မေမေရက်လည်တဲ့နေ့မှာ ထပ်ဆုံ:တယ်။သားနဲ့ သမီးကို စာလည်းသင်၊ လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်လည်း သင်ပေးပါ တီချယ်ဆိုပြီး တဖွဖွပြောတတ်တဲ့အစ်ကိုနဲ့အစ်မ။
ကိုယ့်သားသမီးတွေသင်ရုံသာမက.. တီချယ်ရေ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းကလေးတွေ အတွက်လည်း တစ်ချိန်စာလေးလုပ်ပေးပါဦး။ ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းကလေးတွေအတွက်လည်း ပြောထားသေးတယ် အချိန်ချန်ထားဦးနော် . ..ဆိုပြီး sharing လုပ်ပေးတတ်တဲ့အစ်ကိုနဲ့အစ်မ။
သားနဲ့သမီးကိုချစ်လွန်းလို့ အရာရာဂရုတစိုက်အမြဲရှိတတ်တဲ့ အစ်ကိုနဲ့အစ်မခုတော့ စိတ်ချထားခဲ့ပြီလား။အရွယ်နဲ့မမျှ ခံစားကြရရှာမှာတီချယ်ရင်နာလိုက်တာ ဇာနည်နဲ့ဇာခြည်ရယ်အားတင်းထားကြပါ ကလေးတို့ရယ်.”လို့ ရေးသားထားပါတယ်။